खानेकुरामा मिसाइने रंग हेर्दा आकर्षक तर निम्त्याउँछ यस्ता जोखिम ! | Hamro Doctor News
खानेकुरामा मिसाइने रंग हेर्दा आकर्षक तर निम्त्याउँछ यस्ता जोखिम !
हेर्दा राम्रो र आकर्षक देखिने खानेकुरा मिठो होला भनि त्यसतर्फ लंंोभिनु कुनै अनौठो कुरा होइन । खानेकुराको रंगरुप र पाचन प्रणालीको गहन अन्तरसम्बन्ध हुन्छ, तर त्यो भन्दा पनि गहिरो अन्तररहस्य हाम्रो मनोविज्ञान र खाद्यवस्तुको रंगरुपसँग गासिएको हुन्छ ।
उपभोक्ताको आहार मनोविज्ञानको अपरिपक्व प्रवृत्तिको सबैभन्दा बढी दोहन आजका खाद्ययवस्तु व्यवसायीहरुले गरिरहेका छन् । थरिथरिका जंकफुड प्रोसेसिगं फुड तथा आधुनिक तयारी खानेकुराको व्यापार जगतको व्यापक चलखेल कृत्रिम रंग, सिन्थेटिक कलर तथा आकर्षक मन्दविषहरुले धानेका छन् । विशेषज्ञहरु भन्छन् खानेकुरामा मिसाइने कुनैपनि कृत्रिम रंग जतिसुकै प्रमाणित भएपनि स्वास्थ्यका लागि हानीकारक नै हुन्छन् ।
अर्काेतर्फ विज्ञानका नाममा थरिथरिका छद्म र अल्पसत्यपरक शब्दचित्र भ्रमजालको सञ्जालले अल्पज्ञानी उपभोक्ताको मति एकोहोर्याएर मोहित पारेको छ । पटक पटक दोहोर्यएर हेर्ने रसुन्ने गरेपछि विवेकशिल मान्छैको त बुद्धि भ्रमित हुन्छ भने, अधुरो जानकारी राख्ने सामान्य लेखपढ गरेका मान्छेको के कुरा ?
यी वस्तुहरुमा पनि कृतिम रंग
आधुनिक श्रंगार सामाग्री
रोगोपचारमा प्रयोगहुने उपकरणहरु
हेयर स्याम्पु, लिपिस्टिक, ह्यान्ड वास
टुथपेस्ट, साबुन, जेल, केशतेल, एरोमा एसेन्स आदि बजारिया वस्तुहरु
किन प्रयोग गरिन्छ रंग
खाद्यवस्तु उत्पादन एवम् प्रशोधन गर्ने क्रममा घाम, पानी, हावा, आद्रता तथा भण्डारणका क्रममा उड्न सक्ने रंगलाई पुनस्र्थापित गर्न,
गाढा तथा आकर्षक रंग थपेर ग्राहकको आँखा छल्न र पल्काउन
प्राकृतिक रंगले नपुगेर कृतिम रंग थपि खानेकुरालाई पूर्ण प्राकृतिक देखाउन
अलगअलग खाद्यवस्तु मिसाउनुपर्ने अवस्थामा त्यसबाट उब्जने तेस्रो किसिमको रंग मेटाउन
खानेकुरा हेर्दै स्वादिष्ट देखिने भ्रम सिर्जना गर्न
तपाई आफै विचार गर्नुस्, जुन पदार्थबाट अति प्रज्वलनशील मानिने पेटोल, डिजेल, तारपिन तेल तथा कोइला बनाइन्छ, सोहि कच्चापदार्थबाट निर्माण गरिने कृतिम रंग पेट र स्वास्थ्यका लागि कति खतरनाक होला ?
फोर्स पत्रिकामा प्रकाशित लिभिंग इन कलरः द पोटेन्सियल डेन्जर अफ आर्टिफिसियल डाइज नामक आलेखका अनुसार कृतिम रंगको असरले बालबालिकामाअति चन्चलता र त्यसले मानसिक शक्तिमा ह्रास ल्याउने हुन्छ । उक्त आलेखले कृतिम रंगको प्रभावलाई संक्षेपमा स्वास्थ्यको क्षति भनी सम्बोधन गरेको छ ।
वर्तमान समयमा क्यान्सर जन्य रोग बढ्नुको पछाडि कृतिम रगंको ठूलो हात छ । वासिंटन पोष्ट पत्रिकामा प्रकाशित एक वस्तुगत सर्वेक्षणमा आधारित लेखअनुसार सानो उमेरमा हुने मोटोपनाको बढ्दो समस्या पछाडिका विभिन्न कारणहरुमध्ये कृतिम रंग एउटा गम्भिर कारण हो ।
नयाँ पिडिका केटाकेटीहरुमा बढ्दो व्यवहारजन्य विकृतिको एउटा गुप्त कारण खानेकुरामा मिसाइने कृतिम र सिन्थेटिक रंग हो ।
कृत्रिम तथा सिन्थेटिक रंगहरुको विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिने थुप्रै सामाग्रीहरु हाम्रो वरपर र खेतबारीमा सहजै उपलब्ध छन् ।
खाद्यवस्तुहरुलाई सुस्वादिष्ट देखाउन रंग भर्न सक्ने सबैभन्दा उत्तम विकल्प यी हुन्
अंगुरको ब्रोक्राको सारतत्व
सखरखण्डको बोक्राको सर
रातो बन्दाकोवीको रस
डा. राज् अधिकारीको पुस्तक खाने कसरी पिउने कसरीबाट
Last modified on 2019-07-24 13:41:47